फेसबुकमा प्रेम बस्यो, २० वर्षे ठिटोसँग भागिन् ५० वर्षीया महिला ! - Everest Dainik - News from Nepal
फेसबुकमा प्रेम बस्यो, २० वर्षे ठिटोसँग भागिन् ५० वर्षीया महिला !
एजेन्सी । भारतमा ५० वर्षीया महिला २० वर्षे युवकसँग फरार भएको खबर बाहिर आएको छ । घटना त्यहाँको को मोदीनगरको हो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यी दुईको दोस्ती फेसबुकमार्फत भएको थियो । महिलाको एक छोराको विवाहसमेत भइसकेको बताइएको छ । महिलाका श्रीमानले यसबारे पुलिसलाई जानकारी दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । पुलिसले युवकको मोबाइल निगरानीमा राखेको छ ।
याे पनि पढ्नुस छोरीले प्रेम गर्ने डरले बिद्यालय पठाउन बन्द
नवभारत टाइम्सका अनुसार महिलाका जेठो छोराले उनलाई ६ महिनाअघि मोबाइल दिएका थिए । त्यसपछि महिलाले ह्वाट्सएप र फेसबुक आइडी बनाएर चलाउन थालिन् । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नवभारत टाइम्सले लेखेको छ, ‘तीन महिनाअघि महिलाको फेसबुकमा युवकसँग दोस्ती भएको थियो । एक महिनादेखि दुबैजना फोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए ।’
याे पनि पढ्नुस फेसबुकले पहिलो पटक एसियामा डाटा सेन्टर बनाउँदै
महिलाको फोन हेरेपछि यी दुईको प्रेमप्रसंगबारे खुलासा भएको बताइएको छ । युवक बीबीएका छात्र भएको बताइन्छ । पुलिस गजेन्द्रपाल सिंहले यी दुईको खोजी कार्य जारी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन् ।
ट्याग्स: Facebok, love